Indawo yokuhlala yaseBackwaters ne-Canoeing & Seafood -Munroe
I-VOYE HOMES I-Mundro Greenland iyindlu yangasese yangasese engu-03 enesitayela samagugu esinamakamelo ane-AC kanye namagumbi angewona awe-AC akhiwe ethangeni le-Ashtamudi Lake elingemuva elingemuva eKerala, elinamanani athengekayo. I-Munroe Island e-Kollam iyindawo ekahle yabavakashi yeCanal Cruise kanye nendawo ekahle yohambo lwe-Family Getaways noma i-Group. Le villa itholakala endaweni ekahle eduze nomfula i-azure Kallada futhi inikeza nelungelo elikhethekile lesikebhe sokuhamba ngesikebhe nalapho ungathola khona okuningi. yobumnandi usuku lonke.
I-VOYE HOMES I-Mundro Greenland iyikhaya lamaholide elizimele nelinokuthula lisosebeni lomfula iKallada. Lesi siqhingi sase-Munroe sinikeza ukunethezeka kwesimanje okuyisisekelo ngamanani athengekayo kalula. Yindlu esanda kwakhiwa engu-03 enesitayela samagugu esinomoya (Amagumbi angu-02) namagumbi angenawo umoya ( 01 Room) kanye nendawo yokudlela ehlomele kahle etholakala endaweni engamahektha ohlaza bemvelo. Sihlinzeka ngendawo yokupaka yangasese, i-Wifi yamahhala, ibhulakufesi elimnandi, izinto zokuhlanzeka zomuntu siqu, indawo ephephile nevikelekile ephethwe umsingathi wendawo uMnu. Sethu nomndeni wakhe omangalisayo. Igumbi ngalinye lifakwe i-TV yesikrini esiyisicaba, indawo yokudlela encane, igumbi lokugezela elifakwe kahle nelangasese elineshawa.
I-Munroe Island Kollam iyiqoqo leziqhingi ezinhle ezitholakala lapho kuhlangana khona ichibi le-Ashtamudi kanye nomfula iKallada, esifundeni saseKollam, eKerala. Isiqhingi singafinyeleleka ngomgwaqo, ujantshi kanye nokuhamba emanzini aphakathi nezwe. I-Munroe Island iyindawo eheha kakhulu abavakashi futhi ingenye yezindawo ezinkulu zabavakashi eKollam naseKerala indawo yokuqala yezokuvakasha esekwe emphakathini, lapho umuntu engathola khona uhambo lwesikebhe, ukugibela izikebhe endlini futhi abukele inqubo yokubuyisela amakhoyili, ukudoba, ukuphakelwa kwama-prawns, iwashi lezinyoni ezifudukayo, emincane. imisele nemigudu yamanzi, amapulazi kakhukhunathi ogwini lwechibi, amachweba kanye nezitshalo zomhlume.
Bakhaya baseVoye, kuwo wonke amakhaya namukelwa umsingathi wethu omuhle futhi benza okungaphezu nje kokunikeza okhiye. Bazokusiza ukuthi wazi kabanzi ngendawo oya kuyo njengamasiko endawo, ukudla, impilo nokunye okuningi ukuze uzinze endaweni entsha. Amakhaya Ayigugu Asebhange Lomfula Kallada - VOYE HOMES Mundro Greenland.
• Ibhulakufesi lesintu • Ukhukhunathi othenda • Amathempeli • Ukugibela izikebhe • Ukugibela Iziqhingi
• I-village walk • Clam processing • Folk music • Local Shop • Traditional home • Traditional lanch • Wonderful Clam shell Craft • Ikhaya lesintu • Isitolo sendawo • Ukusenga inkomo • Ukudla okulula kwakusihlwa • I-Tuk-tuk • Ukwaluka amaqabunga kakhukhunathi
. Ukuxuba Kwendabuko kanye Nezisetshenziswa Zokugaya's • Toddy tapping
• Hamba nabadobi niyobona ukuthi balukha kanjani ukhwathu.
• Izingxenye zokwakha izikebhe ezingezona izimoto • Uhambo lwasePeruman Jangar
• Ukudoba ngezindlela zesintu • Ukuvakashela echibini lase-Ashtamudi • Ukuhamba ngezikebhe •Ihlathi Lommango • Hamba nabadobi niyobona ukuthi bawukha kanjani ukhwathu.
• Inhlanzi • Inkalankala •I-Prawns • I-Karimeen (I-Pearl spot fish) • I-squid •I-Oyster • Izimbaza njll. • I-Traditional Kerala Cuisines • Toddy • Amaswidi • Amasnakhi